Gardenscapes 3.6.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.6.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Gardenscapes
Gardenscapes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Gardenscapes မှကြိုဆိုပါ၏! ယင်း၏ဟောင်းတဦးဘုန်းအသရေဖို့အံ့သြစရာဥယျာဉ်ကို restore မှမမျှော်လင့်ဘဲပွေီးမှနှင့်အလှည့်အပြည့်အဝတစ် storyline အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းကိုပိုကျ။
တစ်ဦးစွန့်စားခရီးစတင်: Austin, သင့် Butler, နှင့်တစ်ဦးအပါအဝင်ပွဲစဉ်-3 အဆင့်ဆင့်ရိုက်နှက်ဥယျာဉ်တော်၌ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ restore နဲ့အလှဆင်တစ်ခုကိုရရှိထားသူလျှို့ဝှက်ချက်များ၏အောက်ဆုံးရနှင့် In-ဂိမ်းထညျ့၏ကုမ္ပဏီပျော်မွေ့ဇာတ်ကောင်, ရယ်စရာခွေး! မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အချို့သောဥယျာဉ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ကြနှင့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဇာတ်လမ်း၏သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည်။ အခမဲ့အဘို့သင့်အိပ်မက်ဥယျာဉ်ကို Build!
●စှဲဂိမ်း: လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်ပွဲစဉ်, restore နှင့်ဥယျာဉ်အလှဆင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မှာတစ်ချိန်ကအသက်ရှု-ဆည်းပူးနေစွန့်စားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်!
သငျသညျအရာခပ်သိမ်းအပေါ် tabs များစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်●တစ်ခုက In-ဂိမ်းလူမှုကွန်ယက်
ဥယျာဉ်တော်၌●အမျိုးမျိုးဒေသများ, ထူးခြားတဲ့အဆောက်အဦများနှင့်အတူအသီးအသီး: ကျိုးပဲ့သောစမ်းရေတွင်း, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဝင်္, ဟောင်းအိမ်ကြီးနှင့်အများကြီးပို
●ပထမဦးဆုံးလာတစ်ဦးကအသိုင်းအဝိုင်း - သင့်ရဲ့ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်အိမ်နီးချင်းများဖြစ်!
Gardenscapes အချို့ In-ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်သော်လည်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Gardenscapes ခံစား? ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/Gardenscapes
Instagram ကို: https://www.instagram.com/gardenscapes_mobile/
မေးခွန်းလွှာ? gardenscapes@playrix.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအားဆက်သွယ်ပါ
Gardenscapes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Gardenscapes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Gardenscapes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Gardenscapes အား အခ်က္ျပပါ
lilouw85 စတိုး 2.42k 682.69k
Gardenscapes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Gardenscapes အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.6.0
ထုတ်လုပ်သူ Playrix Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.playrix.com/privacy/index.html
File Size: 104.27MB
Release date: 2019-08-08 03:00:53
လက်မှတ် SHA1: B0:CB:21:8C:78:F8:39:52:9F:57:21:E1:B0:75:7A:91:D1:BC:1E:2E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrey Maklakov
အဖွဲ့အစည်း (O): Playrix
နယ်မြေ (L): Vologda
Gardenscapes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ